မြန်မာ စကားပုံများ - ဒူးလောက်တင်မှ ရင်လောက်ကျသည်
Home » ဒူးလောက်တင်မှ ရင်လောက်ကျသည်	ဒူးလောက်တင်မှ ရင်လောက်ကျသည်
ရေအိုးကို တစ်ယောက်တည်း ပင့်တင်သည့်အခါ ရေအိုးကိုဒူးဆစ်အမြင့် လောက်ရှိသောနေရာတွင် တစ်ဆင့်တင်ထားပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်၍ အိုးပင့်သော အခါ ရင်နှင့်တစ်တိုင်းတည်း အမြင့်လောက်ရရှိ၍ ခေါင်းပေါ်အထိ တစ်ဆက်တည်း လွယ်ကူစွာ တွန်းပပင့်တင်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ (ထိုထက်နိမ့်သော် ဆွဲမရပြီး မြင့် လွန်းသော် ထိုင်မ၍လည်း လမ်းခုလတ်ဖြစ်၍ မလွယ်ဘဲရှိတတ်သည်)။ အတိုင်းအဆ သင့်လျော်အောင် ကြိုတင်မှန်းထားတတ်ရန် လိုကြောင်းကို ညွှန်ပြ၍ သုံးနှုန်းသည်။ (ပိုပိုမိုမို မှန်းထားမှ အလျော့တွက်နှင့် သင့်ရုံရှိမည်ဟု ဆိုလိုသည်။)
myowai says:	June 28, 2009 at 4:36 pm	many thank to you,
i always consider about it,but i did not get the answer.
now i have got it.so thank again.
Anselm says:	January 11, 2010 at 7:12 pm	stupid guy
crystal says:	June 18, 2010 at 5:31 pm	ဒါအကိုးအကားရှိလား၊ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်ရေးတာလား။ ဆရာမသင်ဖူးတာတော့ ဒီစကားပုံဟာ ရေအိုးပင့်ခြင်းမှလာတာမဟုတ်ကြောင်း၊ မုဆိုးမျှားပြစ်ခြင်းမှလာကြောင်း မှတ်သားဖူးတယ်။ မုဆိုးဟာ ပြေးနေတဲ့ သမင်ကို လေးနဲ့ချိန်ရာမှာ ဒူးပေါ်တင်ပြီးချိန်ရကြောင်း၊ ဒူးလောက်တင်ထားခါမှ သမင်ရဲ့ ရင်အုပ်ကိုတည့်တည့် မှန်နိုင်ကြောင်း။ သေချာအောင် ဆရာများကိုသော်လည်းကောင်း အကိုးအကားစာအုပ်များကိုသော်လည်းကောင်း ရှာကြည့်ပေးပါ။ ကျွန်မ မှားရင်လည်း အကိုးအကားနှင့်တကွ ရှင်းပြပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ariel says:	December 24, 2010 at 3:00 pm	ကျွန်မလည်း ဒူးလေး ပစ်တာကနေ လာတယ်လို့ပဲ မှတ်သားဖူးပါတယ်။
myat su mon thu says:	June 22, 2010 at 1:06 pm	ဒူးပေါ်တင်ရတာလား..
hanlintunn says:	May 23, 2011 at 11:15 pm	ကျွန်တော်ဖတ်မိတဲ့စကားပုံစာအုပ်ကရတာလေးကိုရေးပေးပါမယ်..
ချိန်တွယ်ပြီးပစ်သောအခါမှ မျှားသည် ရင်လောက်ကိုရောက်နိုင်သည်ဟူ၍
so says:	October 24, 2011 at 3:38 pm	စကားပုံစာအုပ် သိချင်ပါသည်။
zay yar says:	April 24, 2012 at 4:10 pm	yes. the main entry is wrong. the correct story is from “မုဆိုးမျှားပြစ်ခြင်း” .. There is the “Myanmar Proverbs” book published by Myanmar Literature Board. That book is the best reference and the strongest reference….
စကားပုံနှင့် ဆိုလိုရင်များ၊နီးစပ်သောစကားပုံများ | danyawadi says:	May 23, 2012 at 11:22 pm	[…] ဒူးလောက်တင်မှ ရင်လောက်ကျသည် […]
အတ္တကျော် says:	April 29, 2013 at 3:01 am	မြန်မာစာအဖွဲ့ကထုတ်တဲ့ မြန်မာ စကားပုံစာအုပ် (၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလထုတ်၊ ပထမအကြိမ်) စကားပုံအမှတ် ၃၁၁၊ စာမျက်နှာ ၁၁၅ မှာ သားကောင်ကို လက်နက်ဖြင့် ချိန်ရွယ်၍ ပစ်ခတ်ရာတွင် ရင်ဒူးနေရာသို့ မှန်း၍ပစ်မှ ရင်ဘတ်ကို မှန်နိုင်သကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်ရာတွင် ပို၍ ရည်မှန်းထားမှ သင့်ရုံကျသည် လို့ ဖွင့်ဆိုပေးထားတဲ့အပြင် အောက်ခြေမှတ်စုမှာ ဒူး (ရင်ဒူး) = တိရစ္ဆာန်၏ ရင်ညွန့်တွင် နံရိုးနှစ်ဖက်ဆုံရာ အရိုးနု။ (ရင်နုရိုးဟုလည်းခေါ်သည်)ဆိုပြီး ရှင်းလင်း ဖွင့်ဆိုပေးထားပါတယ်။ Reply
under ဒ category	10 comments. Why not leave one?
4,471 views on this proverb	(3 votes, average: 4.67 out of 5)	Print this proverb